I-Telegram Spy App - Gcina imiyalezo yombhalo we-Telegram Imibiko yengxoxo nezwi
I-Telegram Voice Spy App - Landelela Imilayezo Yombhalo Yombhalo We-Telegram Nezingcingo Zezwi
Thola izandla zakho kwimiyalezo yezwi leTelegram ukuze uvikele intsha yakho ebubini bezokuxhumana kwezenhlalakahle futhi uhlolisise imisebenzi yesisebenzi sakho kumadivayisi omnikazi wenkampani.
Hlola izingxoxo zeTelegram ngeTheOneSpy
Ukuqapha kwe-TOS imiyalezo yezwi yocingo uhlelo lokusebenza lokulandelela ngezwi le-telegram luyadingeka nanamuhla lapho ukuxhashazwa kwe-cyber kukhula, i-stalker ikuyo yonke indawo kwi-intanethi futhi abasebenzi kubonakala bematasa kuma-social social kumahora okusebenza. TheOneSpy isofthiwe yokulandelela i-telegram kwenza abazali bahlole yonke imisebenzi izingane nezingane ezenza kuhlelo lokusebenza lwe-Telegram oluthile lokuthumela imiyalezo njengamakholi wezwi. Umsebenzisi angakwazi hlola izingcingo ze-telegram ngokunembile nokusebenza kahle.
I-TheOneSpy Telegram Spy App ikuvumela ukuthi Uvumele Ukwazi
Imilayezo ethunyelwe futhi yamukelwa kanye nesikhathi esiqondile sesikhathi
Yonke imilayezo yezwi ethunyelwe neyamukelwe
Amafayela e-Emojis, Stickers nama-Gifs athunyelwe futhi atholakele
Landelela i-Telegram Voice ukubiza noma yikuphi i-Android kanye namadivayisi we-iOS ngokusebenzisa I-Telegram Voice Spy App
Indlela Yokuhlola Inkulumo Yombhalo We-Telegram Nezingcingo Zezwi ku-Android Smartphones Nge-App TheOneSpy?
Imilayezo Yezwi Yetelagram
Vula iselula yakho noma isiphequluli se-laptop bese ubhala kuwebhu cp.theonespy.com. Beka iziqinisekiso zakho zokungena ukuze ungene ngemvume kudeshibhodi yakho bese uchofoza IM izingodo kusuka kwimenyu yangakwesobunxele. Lokhu kuzokuqondisa kabusha kuzo zonke ikhasi le-IM logs. Bese ukhetha Amalogi we-telegram kusuka kwimenyu ehlehlisayo bese uhlola konke Amalogi wengxoxo yocingo.
Uzokwazi ukufinyelela ekhasini elinomhlu oluphelele lwemenyu ngakwesokunxele ngakwesokunxele kwesikrini. Skrolela kancane bese uchofoze kwi-IM's izingodo bese uhamba ikhasi lapho udinga ukulungisa khona I-Telegram izingodo zezwi. Manje uzokwazi ukubuka wonke amakholi wezwi kanye nesitembu sesikhathi esigcwele.
Yiziphi Izici Zokuqapha Esizinikeza Nge-Telegram Spy Software?
Kungani Udingayo i-TheOneSpy Telegram Spy App?
Abazali kufanele bazi ukuthi ucingo lwezwi luthandwa kakhulu phakathi kwentsha. Benza izingcingo zezwi, imiyalezo, thumela amavidiyo nezithombe kubangani babo be-inthanethi okungaba yingozi kakhulu kubo. Abasebenzi bahlala besebenzisa izinhlelo zokusebenza zenhlalo kumadivayisi enkampani kubandakanya i-telegram. Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlolisisa imisebenzi yabo ikakhulu lapho bekhona ngaphakathi kwendawo yenkampani. Ayikho ithuluzi elingcono kune-TheOneSpy yocingo le-spy software gcina izingane ezisengozini ye-intanethi futhi uyala abasebenzi bakho.
3 ngokusekelwe ku 6 amavoti
Uhlelo lokusebenza lweTelagram lwe-Spy